Soomaali fara badan oo lagu gumaaday ismaamulka Oromadda ee dalka Itoobiya – Xeernews24
Soomaali fara badan oo lagu gumaaday ismaamulka Oromadda ee dalka Itoobiya
Wararka ka imaanaya dalka Itoobiya gaar ahaan ismaamulka Oromadda ayaa sheegaya in Soomaali fara badan halkaasi lagu gumaaday, kadib markii Ciidamada maamulka Oromada weerar xoogan ku qaadeen.
Sida aan Wararka ku helnay Soomaalidda la laayey ayaa gaadhayaa ilaa 65- ruux, waxaana lagu laayey Tuulada la yidhaahdo Gadule oo hoos tagta degmada Darulow ee Ismaamulka Oromadda ee dalka Itoobiya.
Dadka Soomaalidda waxaa laayey Ciidamada ismaamulka Oromadda kuwaa oo la sheegay in ay ka cadheesnaayeen dad ay ka dileen Ciidamada Liyuu booliiska Dowlad deegaanka Soomaalidda Itoobiya.
Madaxa Warfaafinta deegaanka bariga Harerge ee dowlad gobolleedka Oromadda, Cabdirisaaq Maxamed ayaa Warbaahinta u sheegay weerarkan Soomaalidda lagu gummaday in uu dabo socdo weerar ay geesteen Ciidamada Liyuu booliis.
Waxaa uu xusay Masuulkan in Ciidamada Liyuu booliiska ay dileen labo ruux oo Oromo ah mid kamid ahna yahay Askari, waxa uuna intaa raaciyay ehelada askariga oo dilka ka cadhooday in ay laayeen dad Soomaali ah oo kunoolaa deegaanka Gadule.
Rabshadaha u dhaxeeya Soomaalidda iyo Oromadda kunool dalka Itoobiya ayaa marar badan soo noq noqday halkaas, waxaana hada jirta cabsi xoogan oo laga dareemayo xadka ay wadaagaan Maamulada Oromadda iyo kan Soomaalidda Itoobiya.
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2016/10/Ethiopia.jpg 1026 1368 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2017-12-16 11:29:052017-12-16 11:29:05Soomaali fara badan oo lagu gumaaday ismaamulka Oromadda ee dalka Itoobiya
Shacabka reer Saylac oo saluug xoogan ma muujiyey saamiga laga siiyey xukumadda... Xog Halis ah Dawladda Iiraan oo Hubka ay siiso Xuutiyiinta Yemen u Marisa Xeebaha...